Omunye nenqubo main yokukhetha isikhulumi ezingeni amateur namanje ubukhulu. amakholomu Massive ngokuqinisekile ukugcwalisa igumbi umsindo omkhulu, ukugcina ushintsho imvamisa-amplitude yonkana ezahlukene. Nokho, lezi zinto awukwazi ukuthatha uhambo, noma uthathe uhambo oluya ezweni. Umqondo mobile Analogue umculo izinhlelo, akukho onyakeni wokuqala, kodwa eminyakeni yamuva, le ngxenye iye yatha- engakaze ibonwe.
Ngesikhathi esifanayo, abasebenzisi ufuna nje ikholomu, futhi oyisibonelo okuqukethwe ububanzi sokusebenza. Enough kunohlobo oluvamile namuhla isikhulumi ephathekayo nge umsakazo ne-USB flash drive, ephelele ngamandla ezinhle. izinhlelo ezinjalo zikhona imizila abakhiqizi abaningi, kodwa ukuqala iwukucabangela izici nokusebenza amakhono kumadivayisi ephathekayo.
Izici izikhulumi ephathekayo
insimbi yomculo yalolu hlobo kudalwa okugxile kunezinto ezimbili ezihluke kakhulu ethize. Esokuqala kungenzeka impilo yebhethri. onobuhle okunjalo kubalwa hhayi nje ukusetshenziswa egumbini elihlukile, ulalele umculo ngaphandle kokuba ukuxhuma eziko likagesi. Ngenxa yalokho, umsakazo omncane kanye izikhulumi nge ukusebenza e-memory stick noma ibhethri, noma amabhethri. USB Iyatholakala ngeke igcine ngokuzuzisa kuphela ikhono ukuxhuma flash ngemoto, kodwa futhi ngamandla computer. Futhi, kukhona amadivayisi ukuhlanganisa kokubili izindlela ugesi.
Eyesibili isici umehluko ngenxa yokuthi izinhlelo mobile anosayizi lincane uma liqhathaniswa amakholomu isilungisiwe. Yiqiniso, lokhu kuthinta iqophelo umsindo. Akukho lapho ukudluliswa izici classical acoustic yokukhuluma ngaphandle kwendlu ka umbuzo. Nokho, sinombono-headphone ezivamile kanye MP3 abadlali icwecwe, izikhulumi ephathekayo ivelele ngokuba ngcono. Ngokuqondene neminye imingcele futhi izici, zingabantu kancane ezahlukene kusukela onobuhle bendabuko.
Imvamisa spectrum ngeke zinquma ikhono eyisisekelo umsindo. I mkhawulo ziyahlukahluka kusuka 10 kuya 55 kHz. Linembile Futhi Ubuningi bamahora eduze cwaningo yemvelo umsindo isiginali kudinga ukuthi lesi sibalo kwaba njengoba eliphezulu ngangokunokwenzeka. Ikhwalithi ukudlala kulo mkhakha futhi incike isibalo bands - lesikahle kuhilela khona izikhulumi ezintathu. I ephansi imvamisa ezingeni obangela bass.
Endabeni onobuhle izikhulumi ephathekayo kungaba ukukhiqiza kabusha kusuka 20 kuya 500 Hz. Isibalo ngezansi, amazwe acebile kuyoba umsindo. Phakathi izici eziyinhloko engasekelwe ohlelweni umculo livela namandla. Kakade base yomsakazo ephathekayo kanye subwoofer elakhiwa ifleshikhadi - kulesi siteshi luyasetshenziswa, futhi kabusha bass. Ukuze sithole amandla cabanga RMS inkomba, ie ukubaluleka RMS. Ububanzi kuhluka Watts 1 150.
Ochwepheshe sinake ratio uphawu umsindo. Uma uvula i-control ivolumu kuya esiphezulu, kodwa ngaphandle komsindo, ungezwa umsindo omkhulu ovela ngemuva. Umelwe ukukhula yena amandla okwandisa isignali. Lokhu value zokhahlamba kusuka 50 kuya ku-100 DB, futhi ngaphezu kwalokho, ngcono umsindo.
Radio nokusekela flash ngemoto
Kulokhu, khona Sombhalo umsakazo nokusekela Flash Drive uyisidingo nakuba kungebona bonke abakhiqizi kokunikeza ezifana umsindo sokusebenza. Kufanele kuqashelwe ukuthi umsakazo mobile izinhlelo kuphela kungagcini ukusebenza kule FM-band. Uma ufuna ukudlala ngesakhiwo emikhulu, kufanele sicabange ukuthi singakwazi yini ukuvumelanisa imishini komunye umshini ophathwa ngesandla ukuthi isekela uhla oyifunayo.
Manje kubalulekile ukuthi ushintshele kwamanye amadivayisi, okuyinto angakwazi ukusingatha lolu hlobo isikhulumi. Ngakho, izikhulumi ephathekayo nge flash inikeza ikhono ukudlala amafayela ngokuqondile idrayivu esikhiphekayo. Empeleni lokhu kungenzeka uphendulela imishini cishe uhlelo hi-Fi. Ngaphezu unamathele disk hard kungenziwa exhunywe ohlelweni, futhi kwezinye tinkhulumo enikeziwe kanye slot SD khadi.
Ukuze ukuxhumana namanye amadivayisi evame ukusetshenziswa kwe-Bluetooth. I module ilula isebenze futhi kulula ukuyisebenzisa uma ufuna ukuxhuma idivayisi ngaphandle kokusebenzisa izintambo. Okukodwa okumele ukucabange lapho uthenga onobuhle nalokhu yobuchwepheshe, isibalo tags asekelwe. Le nombolo inquma mingaki amadivaysi kungenziwa exhunywe ne umsindo kanye ushintshele ngokushesha komunye ngesikhatsi kokuhlinzwa. Ukuze iwenze ube lula ukuvumelanisa nge umsindo ne-Bluetooth amamojuli uhlinzekwa NFC uhlobo, ukusiza kudivayisi mate Swayipha ezalethwa ithegi ekhethekile.
imisebenzi efanayo eyenziwa isiteshi-Wi-Fi, kanye nokuvula i-Internet. Ngokusebenzisa le ndlela, umsebenzisi angakwazi ngqo sakaza umculo kusuka smartphone ngokusebenzisa uhlelo isikhulumi. Noma bangayisethela Umsakazo nge isevisi yewebhu. Ikakhulukazi abalandeli of Apple zobuchwepheshe, abanye abakhiqizi ukunikela AirPlay ubuchwepheshe, ethuthukisa induduzo lenhlangano wokubambisana phakathi amadivaysi amabili.
Yini enye ukuba ayicabangele lapho ekhetha?
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi nemingcele kokujwayelekile Ukukhetha phakathi msebenzi ungenziwa ukwethula lezimanga. Ngokwesibonelo, abaningi musa correlate nge isisindo isikhulumi ukuxhashazwa okwengeziwe bemvelo. Uma ufuna imodeli ukuthi kusetshenziswe ehhovisi noma kuleli zwe, kwenza izibonelelo for isisindo akudingekile - Izikhulumi elikhulu ukunikeza izinga sound kangcono. Uma uhlela ukusebenzisa uhlelo ngokwemvelo noma inqubo ukuhamba, suit Sven izipikha compact usayizi amancane nesisindo. Ukuze ukulalela ukhululekile kufanele kulindelwe futhi uvikelekile umsindo, okuyinto anemisila onobuhle yesimanje, - i kwalokho enjalo ayivumeli bonakalise umbono ukulalela intandokazi ilandelela ngisho nalapho eseduze umsebenzi kwamaselula nokunye digital isignali abamukelayo.
Ungabi kahle ukunikeza ithuba kanye nomsebenzi yokwenziwa - okungukuthi, ngaphandle siqu ugesi walo. kakade Sishilo ukuthi kungenzeka ukushaja kusukela esibonakalayo-USB uma uxhumeke kwi-khompuyutha. Ngaphezu kwalokho, izikhulumi ephathekayo ne-memory stick ungakwazi ukwenza umsebenzi walo ngokuhlanganyela kumadivayisi eselula.
Imodeli kusukela Sven
Producer Sven yenze umbono walokho okubizwa ngokuthi compact futhi-ngokomzimba okulula ikheli udluliseleke Boogie Ball imodeli. Ukuma uhlelo emibalabala sifana ibhola esiyisicaba okuyinto yayincane futhi kalula - endleleni, isisindo salo 600 g Spectrum Frequency kuhluka 100 kuya 20,000 Hz, kanye olulodwa onemizila amandla apharathasi kuyinto 2.4 watts. Ngokuya ukusebenza umsindo Sven benawo cishe zonke izici isici imodeli yesimanje. Kodwa kukhona esinye inzuzo kule nguqulo mobile kukholamu - kuyinto inani layo likwenza ubone. Umenzi nokobana lokhu umsindo in ruble 400 nje. Kusobala ukuthi uhlelo izinga ngentengo ngeke ukuthole, ngakho kufanele ukulungele ukusebenza ngekhebula esilula futhi ebuthaka plastic izindlu. Ezinye izindaba zika-kudivayisi yilona elikhulu entry level isixazululo nge support USB induku.
Isithembiso sokuthenga esiphuma Supra
Inguqulo lubucayi kakhudlwana inikeza Supra sagxiliswa Pas-6255. Nakuba kudivayisi nibonakala olulodwa umugqa sifana imoto izikhulumi, ingasetshenziswa njengendlela uhlelo jikelele. Uhlu lokukhethwa kukho kuhlanganisa: USB flash drive kungenziwa ixhunyiwe, FM-Sombhalo, slot ye-CD-amakhadi, kanye alamu nezwi rekhoda. Njengoba for kwemigomo yokusebenza, imodeli kuyinto stereo 5W ibhethri amandla, ibhethri noma okufanayo USB esibonakalayo.
Futhi inikeza ithuba ukusebenza headphones nge standard mini-Jack Supra. I umsindo kule nguqulo isivele elilinganisiwe ruble 1200. Esikhathini idatha ehlanganiswe akukubi, kodwa futhi kufanele uzilungiselele ezihlukahlukene kahle. Ngokwesibonelo, kukhona slepnuschy esibukweni ilanga futhi bengakufanelekeli imenyu. Ihlawula lezi amaphutha umsindo ehloniphekile, ngokukhethekile, ungezwa bass acacile futhi enemininingwane.
Imodeli kusukela JBL
Uma inkampani wanikela izipikha ehlonipheke kakhulu ephathekayo Charge. Lapho ukusebenza olinganiselayo futhi ngcono imodeli umsindo kuwufanele engabizi, okuyinto saqinisekisa ukuthi uphumelela emakethe. Namuhla, izikhulumi ephathekayo JBL ethulwa nguqulo ye Pulse, eqhubeka nomqondo Charge. Izici ezikhethekile zalesi simiso kufanele kufake ukukhanyisa ashukumisayo, lapho ezihlukahlukene imibala abathintekayo. ongakhetha Okufanayo emakethe emaningi khona, kodwa Pulse azizwa indlela onokwethenjelwa futhi ukusebenzisa izindlela okukhanyisa, kanye izici svetopodachi kakhulu okungahambisani bangakhathali emehlweni.
Izinzuzo abasebenzisi kudivayisi futhi zihlanganisa jikelele izinga yokukhiqiza kanye umsindo elilungile ukubeka angu-5 impilo yebhethri. Ngeshwa, ephathekayo JBL okhulumayo kule ncwadi yesiHlabelelo Pulse uchungechunge akuyona sipho ezishibhile. Its ithegi intengo ruble 8,000. Kodwa imodeli nge ukuklanywa kanye illuminations abanekhono kakhulu zihlale funa.
Sony brand linikeza izikhulumi ephathekayo e nokulungiswa SRS-X5 ube nendawo yokugcina umxhwele izici. Idivayisi ukala ngaphezu kilogram, kodwa ezihlangene. Ngokushesha kufanele kuphawulwe izinto izinga, zazo wenze lesi ephathekayo isikhulumi. Izibuyekezo bathi umbono ezikhangayo kohlelo kanye singcoliswe umzimba evele enze Qaphela imishini. 3 ubonisa Dynamics ngaphakathi umthamo isamba 20 Watts. Empeleni ngo izinga umsindo futhi kuba inzuzo enkulu zalesi simiso, ngaphandle lwenethiwekhi ikhompyutha, ukudlala CD alalelwayo nomsakazo, kanye ukuvumelanisa nge kumadivayisi eselula.
Ukuzwakala komculo kusukela Yamaha
Okuhlangenwe nakho Japanese kwabakhiqizi eside kakhulu ekuthuthukeni namaphrojektha zomculo, ngakho ikholomu memory stick ngu NX-P100 wathola izici kahle olinganiselayo. I imodeli isisindo compact multicolor umzimba 1.5 kg, eyayinekheli broadband isikhulumi ezimbili. Ukuzwakala komculo inikeza ikhono lokusebenzisa USB esibonakalayo for kuhambisane netinhloso, module wireless NFC ubuchwepheshe.
Kumele kuqashelwe ukuthi le ingenye ezimbalwa ongakhetha ukuthi, ngaphezu ukusebenza kanye quality sound, inikeza ukuvikeleka okuhle ukuze simelane namathonya zangaphandle. Lokhu ikholomu-memory stick, ezithinta amanzi ngabodwa ngezindlela ezihlukahlukene, okungukuthi, umsindo ingasetshenziswa yini ngokuphepha ogwini.
Inguqulo kusuka Philips
Philips yaziwa amadivayisi ephathekayo, kuhlanganise base imodeli ikhasi 9. On platform yayo ngaphezulu usanda kufika emgqeni ukuqhubeka ngesimo acoustic Fidelio P9X. Kuqhathaniswa version yangaphambili eseyintsha uye ngiyilahle ukuma, okwenza umzimba emfushane kakhulu futhi ngokuvamile ezikhangayo. Ngokuphathelene izinga umsindo imodeli kumele kubhekwe njengomunye wezinye best ekilasini. Iqiniso lokuthi akuyona izipikha nje ephathekayo nge umsakazo ne-USB flash drive, kanye uhlelo umculo nezipika zebanga emibili egcwele kanye pair of tweeters. Yiqiniso, kukhona embi ngalo kule ukucushwa - ubukhulu nesisindo. Omele Fidelio ububanzi awukwazi ukuthatha nawe ku uhambo lula, kodwa ukuzilibazisa ongaphandle kuyinto ngokufanele efanelekayo ukusetshenziswa kwalesi imodeli.
Njengoba ubona, isikhulumi mobile ingxenye wehlukile ngempela. Cishe bonke onobuhle zamanje ingasebenza-USB esibonakalayo kukhona FM-abamukelayo futhi okunye okwengeziwe okuwusizo. Kodwa okuhle kakhulu izikhulumi ephathekayo futhi ihlanganisa elikhulu umsindo ukusebenza kanye usizo ukusetshenziswa. Ukuba khona enamandla multi-band izipikha unikeze umculo wangemuva ehloniphekile, abanokwethenjelwa futhi amelana umonakalo zokwakha kanye kuphela ukuvikela ukugxusha lobuchwepheshe ukuze simelane namathonya zangaphandle. Ngeshwa, lezi kanye nezinye izinto kancane kungukuthi njalo ukusebenza nge abakhiqizi endaweni imodeli olulodwa, kodwa ukulinganisela Kusengenzeka ukuthola.
Laptop - kungcono yedivayisi? Izinhlobo kanye laptops
Okuhle isabelomali-headphone: imodeli isilinganiso. Indlela ukukhetha ama-headphone
Indlela ukuxhuma TV yakho laptop yakho nge-VGA? Xhuma i-TV ukuze laptop yakho nge-VGA--HDMI
"Riopan": yokusetshenziswa, ukwakheka, izinkomba, analogs kanye nokubuyekeza